कुटपिट घटनाका आरोपित पतिविरूद्ध उजुरी – इन्सेक
पर्सा ०७५ चैत ११ गते
मनपा–२०, हरपतगञ्ज घर भइ वीरगञ्ज मनपा–११ बस्ने ३६ वर्षीया सुनीता यादवलाई नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा.सचितानन्द यादवले कुटपिट गरेको आरोपमा आरोपितविरूद्ध चैत ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।
चैत ८ गते कुटाइले पीडित सुनीताको मानसिक सन्तुलन पनि गुमेको अवस्था रहेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
पीडित महिलाको पुरै शरीरभरी कुटपिट गरी घाँटी थिची हत्याको प्रयास समेत गरेको परिवारजनको आरोप छ ।
उजुरीको आधारमा आरोपितलाई चैत ११ गते गिरफ्तार गरी प्रहरी हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
पीडित यादवको वीरगञ्जको गण्डक अस्पतालको आइसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको उपचारमा संलग्न डा.सुरेन्द्र यादवले बताए ।
पीडित महिलालाई अस्पताल पु¥याउँदा स्वास्थ्य एकदमै नाजुक रहेकोले दिमागमा अक्सिजन नपुगेर हाइपोक्सीया रोगको सिकार हुन पुगेको उपचारमा संलग्न डा. यादवको भनाई छ ।
डा. सचितानन्द यादवसँग १५ वर्ष पहिले वीरगञ्ज गण्डक बहुअरीकी सुनिता यादवको २० लाख रुपियाँ दाइजो समेत दिई मागी विवाह भएको थियो ।
विवाहको एक वर्ष नबित्दै जेठी पत्नीबाट बालबच्चा नपाएको निहुँमा भारतको रक्सौल निवासी एक महिलालाई कान्छी पत्नीको रूपमा घरमा भित्र्याएका थिए ।
त्यसपश्चात डा.यादवले कान्छी पत्नीसँग मिलेर पीडितकी जेठी पत्नी सुनितालाई निरन्तर मानसिक तथा शारिरीक रूपमा यातना दिँदै आएको कारण पीडित महिला डिप्रेसनको शिकार हुन पुगिन् । जसकारण मानसिक रोगको औषधि सेवन गर्नु परिरहेको उनका भाइ सन्तोष यादवले बताए ।
डा.सचितानन्द यादव नारायणी अस्पतालको अलावा आफ्नो नीजि क्लिनिक पनि सञ्चालन गरेर बसेका छन् । कान्छी पत्नीबाट डा. यादवको दुई सन्तान छन् ।
उनी दुवै सन्तान र कान्छी पत्नीसँगै बीरगंजको आदर्शनगरस्थित आफ्नै भवनमा बस्दै आएका छन् । जेठी पत्नीलाई भने आमाबुवासँगै आफ्नो पुख्र्यौली घर पर्साको हरपतगञ्जमा कहिले राख्ने र प्राय माइतीमै छोड्ने गरेको पीडित महिलाको भाइ सन्तोष यादवले बताए ।
विवाहको १५ वर्षमा आफ्नी दिदी ससुराली पक्षबाट कहिल्यै सुख नपाएको र बहिनीको हरेक खर्च आफूहरूले नै व्यहोरदै आएको भाइ सन्तोषले बताए ।
ससुराली पक्षले उनको माइतीमा फोन सम्पर्क गरी आफ्नो बहिनीलाई लिएर जान भनेपछि घर पुग्दा उनको अवस्था ज्यादै नै नाजुक अवस्थामा देखेपछि उनलाई माइती लिएर आएको र घरमै उपचार गर्दा अवस्था नसुध्रिएपछि अस्पताल भर्ना गरेको पीडित महिलाका जेठो दाइ मनोहर यादवले बताए ।
घर लिएर आउँदा ससुराली पक्षकाले खाना समेत नदिएको र कुटपिटबाट पुरै शरीरभरी निलडाम बसेको देखिएपछि यातना दिएको रहस्य खुलेको उनका माइती पक्षको आरोप छ ।